Thenga Ngoku | December 2021
Iibhegi zangaphandle zeMbotyi zangaphandle ezili-16 zenzelwe ukuthengwa ngo-2021
Iingxowa zembotyi zangaphandle zingabonelela ngezihlalo ezongezelelweyo kwigadi yakho. Ukusebenza, ukungangenwa ngamanzi kunye nokudibanisa intuthuzelo kunye nokuqina, thenga eyona ngxowa yeembotyi zegadi.
Eyona ndawo ingcono yokutyala ngaphandle egadini, iPatio, i-Balcony - Iimbiza zegadi
Hlanganisa isitiya sakho ngemizuzwana ngeembiza zezityalo zangaphandle ezilungileyo kubandakanya ukhuni, iplastiki, isinyithi kunye neterracotta. Thenga ezona mbiza zingcono kwigadi yethu.
I-23 yeeFenitshala zeGadi eziGqwesileyo zokuThenga-Ngaphandle kwefanitshala
Guqula indawo yakho yangaphandle kule ntwasahlobo / ehlotyeni ngeyona fanitshala yegadi intle. Thenga ifanitshala yangaphandle ehambelana nesitayile sakho, ukusuka kwi-rattan ukuya kwi-teak.
Iipoto zezityalo ezixhonyiweyo ezili-17 kunye nezityala zodonga kwizithuba zangaphakathi
Ngaba ujonge ukuxhoma izimbiza zezityalo kunye nezityalo ezixhonywe eludongeni? Ukufezekisa ukuxhoma izityalo kunye neesuculents ngaphakathi ezindlini, thenga ezona mbiza zixhonyiweyo kunye nezityala zodonga kwihousebeautiful.com/uk
Izitulo ze-Egg ezi-21 eziThenga iiNdawo zokuThenga-Izitulo ze-Egg zeeGadi ze-2021
Isitulo seqanda esijingayo, nesenzo esigudileyo sokujija, sisiseko sentsimi. Izitulo zamaqanda egadi zenza ukongeza kwesitayile kwindawo yakho. Thenga ezona zitulo zixhonyiweyo kwihousebeautiful.com/uk.
Iintyatyambo ezingezizo ezenziweyo kwiVase: I-13 yeentyatyambo eziMnandi zeFake kwiiVesi zokuthenga
Ukundikhetha ngokugqibeleleyo kulondolozo lwangaphakathi olusezantsi, siqokelele ukhetho lweentyatyambo ezingezizo ezityeni ukuze zilungele lonke uhlahlo-lwabiwo mali.
I-23 yeeNdawo zokuPhila eziGqibeleleyo zokuThenga ngokuHlaziya kwangoko
Izixhobo zegumbi lokuhlala kukuchukumisa kokugqiba kwegumbi lokuhlala, indawo yokuphumla okanye efanayo. Ukusuka kwiewotshi ukuya kubugcisa bodonga, thenga ezi zinto zilungiselelwe igumbi lakho lokuhlala.
I-19 yeZibane zeGadi eziGqwesileyo: Izibane zangaphandle, iiLambu zeKhandlela, uSolar
Igadi kunye nezibane zibonelela ngesitayile, sokuhombisa indawo yakho yangaphandle. Thenga ezona zibane zangaphandle zilungileyo kubandakanya izibane zamakhandlela kunye nezibane zelanga.
IiBhentshi zoGcino ezi-17 zokuThenga ngo-2021 - iSitulo seBhentshi yoGcino
Coca ukungqubana ekhaya ngeebhentshi zokugcina ezisebenzayo. Eyona fenitshala ifanelekileyo ineenjongo ezimbini, thengisa isitulo esinebhentshi yokugcina, enikezela ngokugcina kunye nokuhlala kwenye.
20 Eyona Mingxunya yoMlilo yokuthenga ngoku -IiChimineas, iGadi yoMlilo
Imingxuma yoMlilo e-UK: Jonga ezona ndawo zethu ziphakamileyo zemigodi yomlilo egadini yakho apha, kunye nee-chimineas kunye nemingxunya yomlilo egadini evela kuJohn Lewis, Dunelm, Made, Amazon kunye nokunye.
Abona baCoci beStam baGqibeleleyo Ukuthenga ngo-2021, Bazama kwaye bavavanywa
Yenza ikhaya lakho likhazimle ngaphandle kwexesha ngokuzikhethela kunye nokuvavanywa kokona kucoca umphunga kunye neemopu zemigangatho, iikhaphethi, izinto zangaphezulu kunye nokunye.
I-B & Q iphehlelela isihlalo seqanda seRattan-Isiphumo: Ifenitshala yeRattan Garden
I-B & Q ikhuphe isitulo seqanda esine-rattan-effect njengenxalenye yefenitshala entsha yegadi- kwaye ilungele ukukhulisa indawo yakho yangaphandle.
Ezona Paint zihlambekayo 2021- 10 zoKhetho kuzo zonke iZitayile zokuhombisa
Sivavanye uluhlu lweepeyinti ezahlukeneyo ezinokuhlanjwa saza sazifumana ngokusekelwe kugqibo lwabo, imvakalelo kunye nokusebenza ngokuchasene namabala aqhelekileyo endlu.
Ukuxhaswa kwezityalo - 5 Iingcamango eziPhezulu zokuXhasa izityalo
Ukuxhaswa kwezityalo: ezi zezona ndlela zilungileyo zokuba abagadi begadi baqeqeshe izityalo zabo ezinyukayo ngezi ngcamango zenkxaso yezityalo, banikezela ngeendlela ezintlanu zokubaxhasa.
Iingcamango zokukhanyisa iigadi: Izibane zelanga, izibane zeFairy, ukukhanya kwezibane zegadi
Khanyisa indawo yakho yangaphandle ngezi zimvo zokukhanyisa igadi. Izibane zangaphandle zegadi zibandakanya izibane zegadi yelanga, izibane zegadi kunye nezibane zegadini.
I-Rust-Oleum Ipeyinti yeKhabhathi yeKhabhathi iQalisa ngeeMibala ezili-110
Guqula iikhabhathi zakho zekhitshi kuhlahlo-lwabiwo mali-Ipeyinti entsha yeRust-Oleum yeKhitshi yeKhabhathi iyafumaneka nge-110 shades kwaye iyachukumisa iyomile ngeyure nje.
Izitulo ezi-19 eziLungileyo zeDiksi zokuThenga-uSihlalo weDisk Wooden, Ukusonga, Ilaphu
Izitulo zedesika zilungele igadi, ipatio okanye indawo eqholiweyo. Kukho uluhlu olukhulu lwezitulo ezenziwe ngomthi onokuzithenga, zonke ezinokugoqeleka kwaye kulula nokuzigcina.
Iitafile ezili-16 ezisecaleni zigqibelele izithuba eziCompact
Itafile ezisecaleni zincinci zilungele iisofa, izitulo zengalo okanye iibhedi. Kwiindawo ezixineneyo, iitafile ezisecaleni ezimxinwa okanye iitafile ezisecaleni ezinemilenze 'enika indawo yokucinga.
Iidesika ezi-14 zokugoqwa ukuze uthenge ngo-2021- Idesika enamaFolda
Iidesika ezisongelayo zilungile ekusebenzeni ekhaya kwiindawo ezincinci. Ezi folda kude nazo kulula ukuseta. Thenga ezona desika zisongekileyo kwiNdlu entle yase-UK.
I-22 yeeRugs zangaphandle eziBalaseleyo- iRig Rug
Iiragi zangaphandle zilungile ekuchazeni 'indawo yokuhlala' egadini kunye nokwazisa uhombiso kwiindawo ezingaphandle. Thenga ezona zixhobo zilungileyo zokulala ukuze ufumane indawo yakho engaphandle.
abasebenzi bafumana inzuzo kaJoanna
Izimvo zangasese kunye nebhafu
ikhitshi elincinci ngaphambi nasemva
imibala ehambelana nohlaza